PressReader - Isolezwe: 2018-09-13 - Kunxenxwa umphakathi ngokubona izilwane
Kunxenxwa umphakathi ngokubona izilwane
ABEZEMVELO KZN Wildlife bagqugquzele umphakathi ukuthi usebenzise le nyanga kaSepthemba ukuyobona izilwane zasendle kwazise kungenwa mahhala eziqiwini zale nhlangano njalo ngoLwesihlanu.
UMnuz Musa Mntambo obhekelele ezokuxhumana kwezeMvelo KZN Wildlife uthe njengoba kuwuSepthemba, uma kunguLwesihlanu abantu abangu-200 bazongena mahhala eziqiwini zabo. Abantu abangena mahhala yilabo abazobukela izilwane zasendle emini akufaki labo abasuke bezolala.
Uthe kusukela ngoSepthemba 17 kuya Septhemba 21 abafundi bezikole ezahlukene bazongena mahhala. Ucele othisha ukuthi benze amalungiselelo afanele ngokuthinta abezemvelo KZN Wildlife ukuze babekise isikhala sabo.
Khonamanjalo uNgqongqoshe wezeMvelo eLimpopo uMnuz Seaparo Sekoati ugqugquzele abantu ukuthi bavakashele iziqiwi zabo ngesikhathi ethula umkhankaso weSouth African National Parks (SaNParks) wokungena mahhala eziqiwini, obusePhalaborwa eLimpopo izolo.
Uthe abantu bazongena mahhala emapaki awu-21 eSANParks ezifundazweni ezehlukene.